Ukuprintwa kwesikrini / ukuprintwa kwezinxibo → Ukuprinta isikrini kwisinxibo
Ukuprintwa kwesikrini yenye yeendlela zokumakisha ezaziwa kakhulu ezihlala zikhethelwa Iikipa zentengiso, ihembe okanye ezinye izixhobo zentengiso ezinje nge iingxowa okanye iminqwazi. Olu hlobo lokuprinta lusebenza kakuhle kwiindawo ezinkulu kunye nezicaba kunye neelaphu ezincinci, ngokungafaniyo isambatho sekhompyuterekhuthazwayo kwimizobo emincinci kunye nezixhobo ezinobungqongqo kancinci kwaye zinobunzima.
Ukuprinta kwescreen-kufanelekile kwimizobo emikhulu kwindawo ethe tyaba
Imizobo, iilogo okanye ubhalo olwenziwe ngomgangatho ophezulu wokushicilela kwesikrini alunakuxhathisa ekusebenziseni nje kuphela, kodwa nasekuhlambeni kumaqondo obushushu aphezulu. Yindlela efanelekileyo yokumakisha ngokunxulumene nomgangatho wayo. Ukuprinta isikrini, kusetyenziswa iscreen, apho ipeyinti isasazeka kuyo yonke i-mesh ngugqirha. Ipeyinti ebetha ilaphu ifakwe emanzini ngokusisigxina.
Iqela lethu libonelela nayiphi na ilogo ekhethiweyo okanye ubhalo ngokushicilelwa kwesikrini.
IMatrix yoshicilelo lwescreen
Uluhlu olubanzi lwemibala yokushicilela isikrini
Olona loncedo luphambili lokushicilela isikrini kukukwazi ukwenza imizobo kuyo yonke imibala. Xa usenza ushicilelo kwimpahla, iigrafiki ezikwi-w imibala enamandla kunye necacileyo.
Uncedo olongezelelweyo lukhetho lokufiphaza. Iipeyinti zinokudityaniswa kunye nenye. Iinkqubo zekhompyuter ezinikezelwe kwinkqubo yokuxuba ipeyinti ngokuchanekileyo ukubala iigrama zombala ofunekayo ukwenza owona mbala uchanekileyo oza kusetyenziswa kwimveliso.
Ukuprintwa kwesikrini kuyamelana nokuhlamba, kunokuhlanjwa koomatshini bokuhlamba ngokuzenzekelayo. Imeko kukushicilelwa okufanelekileyo ngazo zonke iinkqubo zemveliso kunye neepeyinti ezikumgangatho ophezulu.
I-T-shirt enemizobo eprintiweyo kwiscreen
Ixabiso lokuprinta kwescreen lixhomekeke ekusasazeni
Iindleko zokuprinta kwesikrini zixhomekeke kumzamo. Kungenxa yoko le nto kungcono ukuyikhethela iiodolo ezinkulu. Ukulungiswa kwematriki yindleko echanekileyo, ezimeleyo kumzamo.
Kwakhona, ukuba sifuna ukwenza isiqwenga somzekelo wesikipa okanye ibhegi, kuya kufuneka sithathele ingqalelo indleko Ukulungiswa kwematriki. Kule ndlela yokushicilela, umbala ngamnye usetyenziswa ngokwahlukeneyo, kwiscreen esahlukileyo.
Kuza nokulungiselela matrix eyahlukileyo ngombala ngamnye. Nangona kunjalo, ayinamsebenzi kangako nomzamo omkhulu. Isebenza kakuhle kakhulu ngeodolo enkulu yemidlalo, amabhaso okhuphiswano okanye amaqela amaninzi abasebenzi.
Ukuprintwa kwesikrini kufuna ukuthandwa kukusebenziseka kwayo ngokubanzi, kunokusetyenziselwa ukumakisha umqhaphu kunye nezinto zeplastiki, nkqu nokumakisha iinkuni. Ukuprintwa kwescreen kuhlala kukhethwa iimpahla kunye neempahla zentengiso. Ukuprintwa kukumelana nomonakalo womatshini, ukukhanya kwelanga kunye nokufuma.
Siyakumema ukuba usebenze nathi sayina unamava eminyaka yokumakisha intengiso kunye nempahla yomsebenzi. Sinokhetho olubanzi lweemveliso, kwaye iqela lethu liya konwaba ukukunceda ukhethe kunye nendlela yokuprinta.
ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- T-shirtsI-T-shirts eziprintiweyoukushicilela kwiiT-shirtsshicilela kwimpahlaushicilelo lwempahlaimpahla enelogoimpahla kunye noshicilelo kwesikriniiimpahla ezinophawuIipolisi ezinegamaukushicilelwa kwesikriniukudluliselwa kwetrmoiimpahla ezishicilelweyo